Voka-pifidianana: Nahoana no vitsy ny lalao Linux | Avy amin'ny Linux
Valin'ny fanadihadiana: maninona no vitsy ny lalao ho an'ny Linux
La fitsapan-kevitra ny volana teo aloha dia notanterahina tamin'ny fotoana fanovana lehibe ho an'ireo mpampiasa an'i Juegos en Linux: hanana ihany isika amin'ny farany Steam ho an'ny Linux (toa ao anatin'ny tapa-bolana hafa).
Ny fanontaniantsika dia natao hahalala ny antony tsy mbola nahavitan'ny tsenan'ny gaming Linux. Ireto ny valiny. Misaotra ireo mpamaky 1329 XNUMX izay nandray anjara tamin'ny fanadihadiana!
2 Fanazavana manan-danja sasany
Tsy raharaham-barotra: 593 (44%)
Ny orinasa tsy mino ny malefaka. maimaim-poana: 484 (36%)
Vitsy amintsika no mampiasa Linux: 371 (27%)
Tsy misy mpamily tsara: 302 (22%)
Tsy mbola misy Steam ho an'ny Linux: 99 (7%)
OpenGL dia banga: 99 (7%)
Fanazavana manan-danja sasany
Lohahevitra vitsivitsy izay tsy tokony ho fantatry ny rehetra. Ny tranomboky sary DirectX, izay mamela lalao avo lenta avo lenta hiasa eo ambanin'ny sehatra Windows, dia manana safidy hafa maimaimpoana: OpenGL. Ireo tranomboky ireo no ampiasain'ny Linux sy Mac OS X amin'ny lalao ataon'izy ireo. Midika izany fa, amin'ny ankapobeny, ny lalao novolavola ho an'ny Mac OS X dia mora kokoa ny mitondra any Linux. Tsy lazaina intsony fa ny rafitra miasa dia miankina amin'ny BSD.
Ankehitriny, raha ny marina, ny tsena ho an'ny lalao amin'ny Mac OS X dia kely ihany koa, na dia mety kely noho ny Linux aza. Matetika, ireo izay mitaraina fa "tsy misy lalao tsara amin'ny Linux" dia sakaizantsika Windows na ireo izay mampitaha ny Linux amin'ny lalao Windows / DirectX.
Nanaitra ahy tamin'ny fomba tsy dia nisy dikany ny tsy fisian'ny Steam ho an'ny Linux raha ny momba ny famoronana lalao (kalitao) vaovao. Mifanohitra amin'izany fa ny valiny "Tsy raharaha" no tena voafidy. Mino aho fa ny fahombiazan'ny Steam dia hahatonga azy io ho orinasa tsara hampivelatra lalao ho an'ny Linux.
Olana iray hafa tokony hodinihina ny habetsahan'ny vs. ny kalitao. Ny marina dia misy lalao maro ho an'ny Linux, saingy vitsy ny lalao "kalitao", ary izany no tiako holazaina amin'ny lalao 3D, misy vokany sns.
Ankehitriny, ankoatry ny valiny, raha tsy maintsy nisafidy IZAO aho ny antony tsy mbola misy lalao tsara ho an'ny Linux, dia tsy hisalasala aho: "tsy misy mpamily sary mahay". Raha mbola mitohy ny Intel, Nvidia ary ATI tsy manatsara ny mpamily Linux azy dia hitohy ho ratsy ny raharaha. Hevitra fotsiny io ... ahoana ny hevitrao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Valin'ny fanadihadiana: maninona no vitsy ny lalao ho an'ny Linux
lfe-2 dia hoy izy:
Mampalahelo fa varotra daholo ... uu
Miorina amin'ny orinasa ny tontolo ... uu
Valio ny lfe-2
ennesimobit dia hoy izy:
Heveriko fa voalohany kokoa io, nieritreritra aho fa hahazo vato marobe kokoa. Raha ny amiko dia nanomboka tamin'ny Linux aho noho ny mahavariana ny fandaharana Linux, mieritreritra aho fa avy eto no ahazoana azy, ny fahasamihafana dia ny fianarana tsy tapaka, izay tsy misy fanentanana ara-toekarena foana.
Mamaly an'i enesimobit
teny dia hoy izy:
Heveriko fa tsy ny opengl no olana, tsy maintsy ataontsika matotra kokoa ny raharaha ary asehon'i Steam amin'ny alàlan'ny fitaterana olona 4 maty 2 ho an'ny Linux teratany ...
Fantatry ny rehetra fa mifidy izy ka tsy ilaina ny mifanakalo hevitra mazava be ny zava-drehetra ...
Valiny tamin'i Terim
Mamorona tsipika disk miaraka amin'ny mdadm !!!!!
Lazarosy: IDE an'ny Pascal mitovy amin'ny Delphi